pamusoro gumi selenium webdriver mabhuku
Kuru Selenium Wepamusoro gumi Selenium WebDriver Mabhuku
Wepamusoro gumi Selenium WebDriver Mabhuku
Heino runyorwa rwedu rweTop 10 Selenium WebDriver Mabhuku aunogona kushandisa kudzidza Selenium. Mabhuku aya akasiyana uye ndeevatangi vekutanga kuvashandisi vemberi nemimwe mienzaniso inobatsira.
Selenium 2 Maturu Ekuyedza: Yekutanga Gwaro
Dzidza kushandisa Selenium yekuyedza maturusi kubva pakatangaAutomate web mabhurawuza ane Selenium WebDriver kuyedza webhu kunyoreraSeta kumusoro kweJava Nharaunda yekushandisa Selenium WebDriverLearn yakanaka dhizaini mapatani ekuyedza webhu zvinoshandiswa Mune ZvidimbuSelenium automates mabhurawuza. Selenium ine rutsigiro rwevamwe vevatengesi vebrowser vakuru avo vatora (kana vari kutora) matanho ekuti Selenium ive chikamu chekuzvarwa mubrowser yavo.
Kubva pakuseta nharaunda yeJava kumhanya bvunzo pane nharembozha, iine ruzivo rwese rwekuti uwane novice kumusoro nekumhanyisa pakushandisa Selenium..Iwe zvakare uchadzidza mamwe epamberi mazano senge kuyedza yakaoma webhu kunyorera uye kumhanyisa bvunzo mukuenzanirana kuguma kwebhuku. More info…
Kwayedza Automation Uchishandisa Selenium Webdriver neJava: Nhanho nedanho Gwara
Kwayedza Automation uchishandisa Selenium WebDriver, ndiro razvino bhuku rakaburitswa paSelenium 2.0 ichishandisa Java semutauro wekuronga. Iri bhuku reSelenium rakagadzirwa riine zvinangwa zvekureruka uye nyore kwekunzwisisa. Mushure mekubudirira kukuru kwemunyori bhuku rekutanga raNavneesh Garg (Test Automation uchishandisa Unified Functional Testing) bhuku iri rinotevera nhanho yakafanana nedanho nzira yekuisa, kugadzirisa uye dhizaini otomatiki sisitimu uchishandisa Selenium WebDriver uye izvo zvikamu. More info…
Selenium Yakareruka: Selenium-RC, Java & JUnit
Iyo yakagadziridzwa yechipiri edition yeakakurumbira dzidziso gwaro kune otomatiki kuyedzwa. Selenium ndeimwe yeanonyanya kufarirwa open-source otomatiki ekuyedza maturusi anowanikwa nhasi. Kunzwisisa Selenium-RC uye kunyora otomatiki bvunzo mumutauro wechirongwa zvinotsvakwa mushure mehunyanzvi pamusika webasa uye nzira huru yekukwidziridza bhenefiti kubva mukuyedzwa kwayedza.
Kupesana nezvitendero zvevazhinji vanoedza, kudzidza kodhi hakufanirwe kunge kwakaomarara kana kuomarara. 'Selenium Yakareruka' inokutora iwe kuburikidza nehurongwa hwekuisa uye kudzidza kushandisa zvese zvekutanga maturusi anodikanwa kunyora otomatiki bvunzo uchishandisa Java semutauro wechirongwa.
Rakanyorwa muchitaira chekudzidzisa, bhuku iri rinokubatsira iwe kudzidza kukodha kunyangwe usati waronga kare Hapana nguva inopambadzwa pane dzidziso yeotomation kana padding nezve maturusi. Iri bhuku rinotarisana neruzivo rwekuita runodikanwa kutomesa bvunzo dzehurongwa hwekugadzira. More info…
Selenium Dhizaini Mapatani uye Akanaka Maitiro
Kunyangwe iwe uri mugadziri weWebDriver ane ruzivo kana mumwe munhu anga achangobva kupihwa basa rekugadzira otomatiki bvunzo, bhuku iri nderewe. Sezvo iwo mazano uye pfungwa dzakatsanangurwa nemazwi akareruka, hapana chiitiko chekare pakombodhi yekomputa kana chirongwa chinodiwa. More info…
Selenium WebDriver Inoshanda Gwara
Selenium WebDriver yakavhurika sosi yewebhu UI otomatiki chishandiso chinoitwa kuburikidza nebrowser-yakatarwa browser mutyairi, iyo inotumira mirairo kubrowser uye inowana zvabuda.
Selenium WebDriver Inoshanda Gwaro rinokutungamira kuburikidza nemaAPI akasiyana eWebDriver ayo anofanirwa kushandiswa mukuyedza otomatiki, ichiteverwa nekukurukurirana kweakasiyana maitiro eWebDriver anowanikwa.
Iri gwaro rinokutsigira nekukupa iwe kuwana kune sosi kodhi mafaera, kusanganisira akakosha mafaera eHTML, ayo anotendera iwe kuti ushande nejQuery uye mimwe mienzaniso mubhuku rese. Chekupedzisira, iwe uchagamuchira yakadzama tsananguro yemabatiro aungaita neazvino maficha eWebDriver kuburikidza nhanho-nhanho nhanho dzinodzidziswa. More info…
Selenium Yekuedza Zvishandiso Cookbook
'Selenium Testing Tools Cookbook' inongedzo inowedzera iyo ichakubatsira iwe kudzidza uye kushandisa epamberi maficha eSelenium WebDriver API mune dzakasiyana mamiriro ekuvaka yakavimbika test automation. Iwe unozodzidza mashandisiro ekushandisa maficha eSelenium uchishandisa akareruka uye akazara mienzaniso. Iri bhuku rinokudzidzisawo iwe zvakanakisa maitiro, dhizaini mapatani, uye maitiro ekuwedzera Selenium.
'Selenium Testing Tools Cookbook' inoratidza vanogadzira uye vanoedza avo vanoshandisa kare Selenium, maitiro ekuenda padanho rinotevera uye kuvaka yakachengetedzeka uye yakavimbika bvunzo bvunzo uchishandisa epamberi maficha echishandiso. More info…
Kudzidzira Selenium WebDriver
Iri bhuku rinotanga nemabatiro ekugadzirisa matambudziko akaoma auchasangana nawo paunotanga kushandisa Selenium munzvimbo yebhizinesi, ichiteverwa nekuburitsa mhinduro chaiyo painokundikana, uye izvo zvakasarudzika zviri izvo, zvitsanangure nemazvo (kusanganisira mudzi wechikonzero ) uye ndokuudza maitiro ekuzvigadzirisa. Iwe zvakare uchaona mutsauko uripo pakati pezvitatu zviripo zvisingaenzaniswi kumirira uye kujekesa kumirira, uye dzidza kushanda pamwe neinobudirira peji zvinhu.
Pakupedzisira, bhuku rinokurukura rinouya Selenium W3C kududzirwa uye kuti richakanganisa sei ramangwana reSelenium. More info…
Instant Selenium Yekuedza Maturusi Starter
'Instant Selenium Testing Tools Starter' yakazvarwa kunze kwekuda kwebhuku pfupi, asi rese-rinobatanidza iro rinogona kukupa hwaro hwakasimba mukugadzira nekumhanyisa bvunzo nematombo ekuongorora eSelenium. Iri bhuku rinokugonesa kushandisa simba reSelenium uye kurishandisa mushe mukuyedza, nekukurumidza uye nemazvo.
Iyo 'Instant Selenium Yekuongorora Zvishandiso Yekutanga' inogona kushandiswa seyekupedzisira-kumagumo gwara kana sedhizaini yedhesiki, ine zvikamu zvinobata neese akakosha maficha ekugadzirisa bvunzo dzewebhu kunyorera. Tsananguro nedanho-nhanho yezvakakosha maficha inopihwa nerubatsiro rwemienzaniso yakapfava uye yakapfupika.
Chitsauko chimwe nechimwe chinokubatsira kuti unzwisise zvakakosha zveSelenium nemazano uye manomano anozove hwaro hwezivo yako mune ramangwana. More info…
Yakazadzwa nemienzaniso inoshanda, kutora Nhanho-ne-Nhanho nzira Selenium NeMuenzaniso - Vhoriyamu Iii: Selenium WebDriver haizopa chete muverengi muongororwo uye kuunzwa kuSelenium WebDriver, ichapawo muverengi muongororwo wezviitwa zvepamusoro muAutomated Testing , Automation Frameworks, uye mazano ekuunza Automated Testing. Selenium NeMuenzaniso - Vhoriyamu Iii: Selenium WebDriver inotora nhanho-nhanho nzira yekudzidzisa muverengi mashandisiro eSelenium WebDriver. More info…
Selenium Webdriver Mapoka muC # 2015
Gadzirisa yako Selenium WebDriver matambudziko neichi chinokurumidza gwara kune otomatiki kuyedzwa kwewebhu kunyorera neSelenium WebDriver muC #. Selenium WebDriver Mapoka muC #, Yechipiri Shanduro ine mazana emhinduro kumatambudziko chaiwo-epasirese, aine tsananguro dzakajeka uye akagadzirira-kumhanya Selenium bvunzo zvinyorwa iwe zvaunogona kushandisa mune ako wega mapurojekiti. More info…
for loop vs apo chiuno python
chinyorwa 10 vs chinyorwa 20
Apple inonyorera patent pane inobviswa touchscreen laptop inoratidzira kana: Inguva yakareba kusvika tione iPadBook Mhepo?
Gumi emhando dzakanakisa dzeQWERTY mafoni emafoni kubva panguva dzezvikwangwani zvehurdware zvaitonhorera
Maitiro ekurodha pasi nekuisa iOS 14 uye iPadOS 14 beta, kubva ku iPhone 6s kuenda kuPad ​​Pro 2020
LG G3 mutengo uye zuva rekuburitsa
Kubhadharisa mabutiro eSamsung Galaxy S5 yakaratidzwa neSamsung
YouTube TV iri kupa akawedzeredzwa emuyedzo pane zvimwe zvemukati zvemukati
Yakanakisisa Tenga Nhema Chishanu madhiri abuda: kuchengetedza kukuru paPhones, Galaxy uye nezvimwe
Google yakangopa varidzi vePixel chikonzero chakakura chekukwiridzira kuPixel 4a (5G) ino Chishanu Chishanu
Prime Day inobata pamalaptop, MacBook, Chromebook, malaptop emitambo
Bhash Kana-Else Chirevo Nemienzaniso